‘कामचोर सिस्टमलाई पहिला सुधारौं, युवाहरुलाई विदेश जानबाट रोकौं र गएका विज्ञहरुलाई फिर्ता बोलाऔं’ – पुरा पढ्नुहोस्……
‘कामचोर सिस्टमलाई पहिला सुधारौं, युवाहरुलाई विदेश जानबाट रोकौं र गएका विज्ञहरुलाई फिर्ता बोलाऔं’
यो मुलुकमा स्थानीय प्रतिनिधीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई देशमा रेल नै ल्याउनु छ । मोनोरेल, मेट्रो रेल, पुर्व पश्चिम रेल, चिनको रेल, भारतको रेल ।
विकास भनेकै रेल हो जस्तो गरी सबका सब किन रेलकै पछि लागेका हुन् बुझ्न गाह्रो भयो । देशमा रेल ल्याउँछु भनेको कुरालाई गफ भन्न चाहेको होइन ।
आजको जमानामा सिंगो मुलुकले जाबो एउटा रेल पनि बनाउन नसक्ने कुरै आउँदैन । केही महिना अघिको कुरा हो चाइनाको ननलङग रेलवे स्टेशन १५ सय जना मिलेर ९ घण्टामा बनाए ।
साँझ ६ः३० मा शुरुभएको काम विहान ३ः३० मा सकियो । औजार, उपकरण, जनशक्ति भएर मात्र होइन इच्छा शक्ति पनि चाहिन्छ । सिस्टम नै भद्रगोल भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा ठ्याक्कै यति बर्षमा रेल नै चाहिन्छ भन्ने छैन ।
ल ६ महिनामा रेल बन्यो रे भनेपनि त्यसका लागि आवश्यक सिस्टम, प्राविधिक, निती, आदी चाहिँदैन ? जाबो २५÷३० किलोमिटर बाटो बनाउन त एउटा जेनेरेनशनकै जीन्दगी खेर जाने सिष्टम भएको ठाँउमा रेल प्राथमिकतामा पर्दैन, आए राम्रो, चढौँला ।
देशको राजधानीका सडकहरुमा धुलो उठेको र खाल्डो भएको कति बर्ष भो ? बर्खा याममा हिड्नु र गुड्नु भन्दा धान रोप्नु फाइदा हुने सडकका बारेमा बोलौन ।
मुग्लिन नारायणगढ सडक खण्डको विजोक भएको कति भो ? कुन गुणस्तरमा निर्माण भैरहेको छ ? कहिले सकिन्छ ? ठेक्काको म्याद कति सार्न मिल्ने हो ? यसबारे केही घोषणा सुुृन्न पाउँ न । तपाईहरु पो सिधै प्लेन, हेलिकप्टर र सडकबाटै जानु परे साइरन बजाएर जनतालाई अझ थप दुख दिएर यात्रा गर्नु हुन्छ ।
एकै छिनमा पुग्नु पर्ने गन्तव्यमा कति सास्तीले कति खेर पुगिन्छ ? यहि मौका छोपेर हवाई भाडामा ब्रहमलुट चलाएका छन् कसैले । ध्यान, घोषणा, निर्देशन यतातिर की रेलतिर चाहिएला ?
नागढुङ्गा कंलकी सडकको ताल त्यस्तै छ । ठेकेदार सडक विभागलाई देखाउने, विजुलीको पोल हटेन भनेर सडक विभाग विद्युत प्राधिकरणलाई देखाउने, फेरी खाने पानी, ढल वालाहरुको आफ्नै ताल छ ।
ठेकेदार प्राधिकरण सडक विभाग, खानेपानि, ढल, व्यस्थापन आदी सबै सरोकारवाला एकै ठाउमा बसेर १ घण्टामा गर्न सकिने निर्णय बर्षौसम्म पेन्डीङ हुन्छ । जाबो एउटा मिटिङ त सँगै गर्न नसक्ने कमजोर र कामचोर सिस्टमलाई सुधारौ न पहिला ।
अनि चढौला रेल सररररर् । कयाँै, बाटो पुल जस्ता संरचना बनाउन ठेक्का लिएकाहरु यस वापत पाएको एडभान्सबाट जग्गा किन्छन प्लटिङ गर्छन १÷२ बर्षमा करोडांै पैसा कमाउँछन् ।
केही लाख घुस ख्वाउछन् र ठेक्का रिन्यु गर्छन । आँफु मालामाल । अनि सहि जेनुइन ठेक्कादारहरु भुतmानी नपाएर उल्टो ऋण लिएर टाट पल्टिन्छन् । २÷४ बर्षमा २÷४ अरब कमाउँन भ्याएकाहरुले चाहेको मन्त्रालयमा चाहेका सचिवलाई सरुवा गराइदिन सक्छन्, चेसको गोटी जस्तो एउटा मन्त्रालयबाट टिप्यो, अर्को मन्त्रालयमा राखिदियो ।
हुँदा हुँदा विदेश जान तिर्नुपर्ने पैसाको लागि घरबाटै सिरक डस्ना बोकेर रातभर लाइनमा बस्नु पर्छ । यो थर्ड क्लास सिस्टमलाई पहिला सुधारौ ।
कमिशनको चक्कारमा उड्दै न उड्ने जहाज विमान स्थलमा थन्क्याएको कसले हो, किन हो, बुझौँ । बेइमानहरुलाई पाता फर्काएर जेल कोचौ । ठिक समयमा चल्ने लामा लामा सिटी बस चलाऔं बढी यात्रु नकोेची सुविधा सम्पन्न, सुरक्षीत लामो दुरीका बस चलाऔ ।
देशमै रोजगारी श्रृजना गरी युवाहरुलाई विदेश जानबाट रोकांै, गएका विज्ञहरुलाई फिर्ता बोलाऔं । यती गर्न सकिदा सकिदै रेलको पुर्वाधार पनि बनिहाल्ला त्यसपछि चडौंला रेलैमा सररर् । रेल चाहिन्छ तर त्यो भन्दा पनि महत्वपुर्ण अरु धेरै कुरा रेल भन्दा पहिले चाहिन्छ ।-न्युज२४नेपालबाट
Prevएउटा खुकुरीले ४० जना गुण्डालाई पछार्ने वीर गोर्खाली विष्णु श्रेष्ठ (भिडियो सहित)
Nextउपप्रमुख सुनिताले वडा सदस्यलाई कुटपिट गर्दै कार्यकक्षाबाट ‘गेट आउट’ भनेपछि….
यस्तो बिछोडको गीतले “ईन्द्रेणी” टिममा फेरि हास्दाहास्दै रुवाबासी चल्यो- हेर्नुहोस (भिडियो सहित)